छाला रोगको उपचार विशेषज्ञको परामर्शमा मात्र गर्नुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता छाला रोगको उपचार विशेषज्ञको परामर्शमा मात्र गर्नुपर्छ
on: २३ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०८:०३ अन्तरवार्ता
छाला रोगको उपचार विशेषज्ञको परामर्शमा मात्र गर्नुपर्छ
वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ प्राडा. भाष्कर एमएम कायस्थ वीर अस्पतालको छाला तथा यौन रोग विभागका प्रमुख हुन् । उनी दैनिक २ सय छालाको रोगीको उपचार गर्छन् । छालामा वंशाणुगत, ब्याक्टेरिया र अन्य कारणले समस्या आउने गरेको बुझाइ डा. कायस्थको छ । चाउरीपन हटाउने, छाला राम्रो बनाउने नाममा बढेको कस्मेटिक प्रयोगले छालाको समस्या बढाएको पनि उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, छालाका समस्या र त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका सन्दर्भमा डा. कायस्थसँग आर्थिक अभियानका रञ्जु काफ्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
के कारणले छालामा समस्या हुन्छ ?
घाम, पानी, हावा, प्रदूषणलगायतको प्रत्यक्ष सम्पर्क छालामा हुन्छ । हावा, पानी र प्रदूषणको पहिलो प्रभाव छालामै पर्छ । यी कारणले नै छालामा समस्या आउँछ ।
खासमा छालामा कस्ता–कस्ता समस्या देखिन्छ ?
छालामा मुख्यगरी जन्मजात प्रकृतिका वंशाणुगत र पछिबाट देखिने समस्या गरी दुई किसिमका समस्या हुन्छन् । कतिपय वंशाणुगत समस्या उपचारपछि ठीक हुन्छन् भने कतिपय समस्या समाधान नहुने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । हुर्कने बढ्ने मानिसको छालामा अन्य कारणले पनि समस्या देखिन्छन् । यस्ता समस्या भने उपचारपछि निको हुन्छन् । बाल्यकालमा मानिसको छाला अत्यन्त नरम हुन्छ । त्यसैले छालामा बढी हेरचाह जरुरी हुन्छ ।
छालामा माछाको जस्तो कत्ला, ठेउला आउने, जनै खटिरा, छाला सुक्खा हुने, मुसा, खटिरा आउने हुन्छ । त्यसैगरी औंलाका कापमा काछ लाग्ने, डण्डीफोर आउने, कपाल झर्ने, छाला चिलाउने डाब्रा आउने समस्या हुन्छन् । कलिला केटाकेटीलाई घाउखटिरा आउँछ । किशोरवस्थामा डण्डीफोर, चाँया, पोतो आउने र छाला फुट्ने गर्छ । लगातार यस्ता समस्या देखिइरह्यो भने छालामा टीबी र क्यान्सरको जोखीम बढ्न थाल्छ ।
छालामा हुने समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
ढुसीले हुने समस्याबाट जोगिन खुकुलो लुगा लगाउनुपर्छ । सकेसम्म सुतीका सहज पहिरन प्रयोग गर्दा यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ । आफ्नै मात्र लुगा लाउने गरेमा छालाको रोग सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । रुमाल, काँगियो जस्ता व्यक्तिगत साम्रग्रीको प्रयोग व्यक्तिगत तवरमा नै गर्नुपर्छ । अर्काे, साबुनपानी धेरै प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन ।
छाला रोग हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?
छालामा रोग देखिएपछि विशेषज्ञसँग परामर्श लिने र औषधिउपचार गर्ने गर्नुपर्छ । छालाको समस्यालाई लेजर सर्जरी र अन्य विधिबाट पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ । छालाका रोग विशेषज्ञले औषधिउपचारबाटै समस्याको समाधान निकाल्छन् । छालामा सङ्क्रमण नहोस् भनेर सचेत पनि रहनुपर्छ । गर्मीको समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा, साथीसँग रुमाल शेयर गर्दा, साझा रुमाल प्रयोग गर्दा, लुगाकपडा आपसमा साटेर प्रयोग गर्दा सरुवा प्रकृतिका छालाका रोग एकबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्ने गर्छ । त्यसैले, यस्ता गतिविधिमा पनि सचेत रहनु पर्छ ।
छाला रोगको उपचार घरमै पनि गर्न सकिन्छ कि ?
छाला राम्रो हुन्छ भन्दै मानिसले धेरै पानी पिउने गरेको मैले पाएको छु । पानीले छालामा कुनै फरक पार्दैन । शरीरमा पानीको मात्रा पर्याप्त भएमा मिर्गौलालाई काम गर्न सहज हुन्छ । कडा शारीरिक परिश्रम गर्ने कामदार र खेलाडी बाहेकलाई जाडोमा १ डेढ लिटर र गर्मीमा २ देखि ३ लिटर पानी पर्याप्त हुन्छ ।
बरु ८ देखि १५ वर्षका हुर्कंदा बालबालिका र गर्भवती महिलालाई प्रशस्त तरकारी र फलफूल खान दिनुपर्छ । गर्भवती महिलालाई विशेष हेरचाह आवश्यक हुन्छ । किनभने, गर्भवती महिलाको छालामा चाया आउने, पोतो देखिने र छाला फाट्ने समस्या हुन्छन् । त्यसैले, औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
चिल्लो छाला भएकाहरूले साबुनपानी वा फेशवासले अनुहार सफा गर्दा हुन्छ । तर, सुक्खा किसिमको छाला भएकाहरूले भने सनस्क्रीन लगाउनुपर्छ । सनस्क्रीनका लागि सामान्य छाला भएकाले जेल प्रयोग र सुक्खा छाला भएकाले लिक्विड प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
छालाका लागि आफैले गर्न सकिने काम भनेको प्रशस्त सुत्ने हो । दैनिक ७ देखि ८ घण्टासम्म सुत्ने मानिसको छाला राम्रो हुन्छ । छालाको स्वास्थ्य राम्रो राख्न औसतमा ६/७ घण्टा सुत्नैपर्छ । छाला राम्रो पनि हुन्छ । छालाको समस्या भयो भनेर लहै–लहैमा लागेर जस्तो पायो त्यस्तो औषधि वा क्रीमको प्रयोग गर्नुहुन्न । त्यसो गर्नुभन्दा विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
विशेषज्ञहरू जताजतै उपलब्ध छन्, सरसल्लाह गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । छाला चिलायो भनेर बजारमा सस्तो मूल्यमा पाइने मल्हम प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यसले कीटाणु मार्दैन, बरु कीटाणुको प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । यस्तो भयो भने थप समस्यामा त परिन्छ नै, दोहोरो उपचार गर्नुपर्दा ठूलो धन पैसा र समय पनि खर्च हुन्छ ।